Manchester City oo Manuel Locatelli ka dhigeysa bartilmaameedka koowaad ee qadka dhexe
HomeHoryaalka IngiriiskaManchester City oo Manuel Locatelli ka dhigeysa bartilmaameedka koowaad ee qadka dhexe
January 13, 2021 Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Italy, Suuqa kala iibsiga, Wararka Maanta 0
Manchester City ayaa lagu soo waramayaa inay u aqoonsatay ciyaaryahanka khadka dhexe ee Sassuolo Manuel Locatelli inuu bartilmaameed u yahay suuqa xagaaga soo aadan.
Locatelli, oo 23 jir ah, ayaa noqday mid ka mid ah qadka dhexe ee ugu wanaagsan Serie A-da wuxuuna fure u noqday kooxda Roberto De Zerbi xilli ciyaareedkan.
The Daily Mail ayaa sheegeysa in Pep Guardiola kooxdiisa ay isha ku heysa xaalada Locatelli kaasoo la filayo qiimihiisa inuu ku kacayo ugu yaraan £ 30m.
Locatelli wuxuu markiisii ​​hore kasoo muuqday garoonka kooxda weyn ee reer Talyaani ee AC Milan, halkaas oo uu kulankiisii ​​ugu horreeyay ee safkiisii ​​ugu horreeyay ka bilaabay naadiga isagoo jira 18 jir sanadkii 2016.
Si kastaba ha noqotee, ka dib markii uu hoos uga dhacay kooxda Ac Milan, Locatelli wuxuu u dhaqaaqay Sassuolo 2018, tan iyo markaas wuxuu ku soo barbaaray mid ka mid ah khadka dhexe ee ugu fiican Italy.
Locatelli, oo qandaraas kula jira Sassuolo uu soconayo ilaa 2023, ayaa sidoo kale lala xiriirinayaa kooxda haatan heysata Serie A ee Juventus , waxaana uu doonayaa inuu u wareego koox ku tartameysa Champions League.